Booliska Norwey oo lagu eedaynayo midab-takoor ka dhan ah ajnabiga - NorSom News
Booliska Norwey oo lagu eedaynayo midab-takoor ka dhan ah ajnabiga
Waligaa adoo tareen kasoo dagay ama magaalada iska dhex maraya malagu istaajiyay, oo si kadis ah malaguu waydiiyay inaad sharcigaago keento?. Booliska Norwey ayaa mudooyinkii ugu danbeeyay waday olole ay rabaan inay dadka aan sharciga ku joogin wadanka ama horey u galay danbi, ay wadooyinka ka qabtaan si ay u xiraan ama u celiyaan. hadaba su aasha ayaa ah sidee ayay ku doortaan qofka ay istaajinayaan?.
Dhalinyaro badan oo wadanka ku kortey oo wax badana daganaa, horeyna aan wax danbi ah u galin, ayaa mudooyinkii ugu danbeeyay ka cabanayay in boolisku ay wadada ku istaajiyeen dhowr mar iyaga oo sharci waydiinaya. Waxaana dadka la istaajiniyo u badan dhalinyarada midabkoodu uu madowga yahay. Arintaas oo dhalisay dood badan oo ah inay boolisku ay midab takooraan oo ay si ka duwan dadka kale ula dhaqmaan ajaanibta aan midabkoogu cadaanka ahayn.
Dhaqanka ah in ay boolisku ay si gaar ah u ugaarsadaan dadka midabkoodu madowga yahay ayaa ah mid aad uga dhaqan galay wadanka mareykanka. Hadii aad tahay qof madow ah, jaaniska ah in lagu baaro ama lagu xiro waxay wax badan ka sareysaa in qof cadaan la baaro ama la xiro. waa sababta keentay in sadex meelood meel(1/3) dadka ku jiro xabsiyada mareykanka ay yihiin dad midabkoodu madow yahay. dhibtaas waxaa sidoo kale qabo oo dadka madowga ah kusoo xigo, dadka ka yimid qaarada Latin America ee Hisbanica la yiraahdo.
Ex-Xildhibaan Ubah Abdullahi Aden oo kamid ah dadka uu journalka Utrop ka waraystay arintan ayaa xaqiijisay in arintaas jirto, oo ay ka warqabto dad dhalinyaro iyo dad waaweyn isugu jiro oo ay qabsatay arintaas. Waxaana kamid ah dhibaha ay la kulmaan in wadada lagu istaajiyo ama loo diido inay galaan meelaha qaarkood. Dadkan ayaa sheegay in lagu takoorayo sababtoo ah midabkooda ama labiskooda ayaa ka duwan kan dadka kale. Ubah ayaa intaas ku dartay in dareenka iyo xanuunka ka dhasho marka qofka si xaqdaro ah loola dhaqmo ama hoos loo eego uu yahay mid aad u adag.
Horey ayaa booliska Norwey loogu eedeeyay midabtakoor iyo faquuq ka dhan ah dadka afrika ka yimid iyo waliba dadka Romka loo yaqaano. Waxaana arintaas xili sii horeysey xaqiijiyay hay-ada xuquuqda aadanaha ee Norwey. Qaramada midoobey ayaana kamid ah dadka eedeeyay midabtakoorka iyo habdhaqanka booliska Norwey.
Mar wax laga waydiiyay xalka arintaas ayay ubah ku jawaabtay in ay kalsoonida ka dhaxayso booliska iyo shacabka ay tahay mid muhiim ah. Boolisku shaqadiisa ma ahan kaliya inuu dadka danbiga gala uu xiro, balse wuxuu howlo kala duwan u hayaa bulshada, ayna kamid tahay ka hor tagida iyo ilaalida kala danbeynta. Si taas u suurtagashana kalsoonida ka dhaxayso shacabka iyo boolisku ay tahay mid laga maarmaan. Waxayna intaas ku dartay in sidoo kale ay muhiim tahay in uu boolisku diiwaan galiyo dhamaan waxa uu qabanayo, kvittering iyo cadeyna uu siiyo qofka la istaajiyay si loo ogaado dhibaatadu heerka ay gaarsiisan tahay.
Halkan ka akhriso warbixintan oo dhamaystiran(les saken på norsk her)
Halkana ka akhri eedeynta qaramada midoobey ee booliska Norwey( FN’s kritik mot norsk politi)
Previous articleCiise midnimo oo shalay guul muhiim ah ku hogaamiyay kooxda KFUM
Next articleWasiirka dastuurka iyo cadaalada Norwey oo laga codsaday inuu ka jawaabo arinta gabadha soomaaliyeed